Nubia Red Magic 3 pụtara na asọmpi egwuregwu | Androidsis
Nubia Red Magic 3 na-egosi na asọmpi egwuregwu
Black Shark ewepụtala ekwentị egwuregwu mbụ ya maka afọ a, na Machị, ọ bụghịkwa onye ọzọ Black Shark 2. E gosipụtara nke a na akwụkwọ Qualcomm Snapdragon 855 dị ka onye isi nkwado ike ya.
Na ngwaọrụ a, Nubia ga -eji nzaghachi Red Ime Anwansi 3 na Eprel 28, mkpanaka egwuregwu nke ya anyi ekwuola okwu mbu na nke anyị na -enye ọkwa ugbu a ọzọ, ebe a hụrụ ya na ihe omume ọha awa ole na ole gara aga, tupu ebido ya n'izu na -abịa.
E gosipụtara Red Magic 3 na ngosi Njikọ League of Legends LPL Spring Championship ụnyaahụ. Ndị bịaranụ nwere ihu ọma ịhụ ekwentị egwuregwu na -abịanụ na mmadụ nwere obiọma ịkekọrịta foto.
Nubia Red Magic 3 gosipụtara na mmemme egwuregwu
Red Magic 3 egosiri na enyo iko, mana ọ bụ naanị azụ ya ka a na -ahụ anya. Ekwentị n'onwe ya apụtaghị na ọ dị iche na Red Magic Mars.
A ka nwere otu igwefoto na azụ ngwaọrụ na nyocha akara mkpisi aka ka nwere ọdịdị hexagonal, n'agbanyeghị agbagoro akara Red Magic. Ị nọ ugbu a n'etiti igwefoto na nyocha mkpịsị aka. Ụdị agba dị na onyonyo a na -acha ọbara ọbara, mana anyị na -atụ anya ka Nubia kwupụtakwa agba ndị ọzọ.
Nubia Red Magic 3 gosipụtara talent ya na Master Lu
Ekwentị ahụ ga -enweta ihe nrụpụta Snapdragon 855 yana 12GB Ram na a 5,000 mAh batrị. E kwuwokwa na nwee ngosi nwere oke ume ọhụrụ. Ọtụtụ ekwentị nwere ọnụego ume ọhụrụ 60Hz, mana ụfọdụ, dị ka 2 nke Razer, nwere ọnụego ume ọhụrụ 120Hz, nke na -ebute mmegharị ngwa ngwa na nzaghachi dị nro mgbe ị na -agagharị ma ọ bụ karịa karịa mgbe ị na -egwu egwuregwu, ma e jiri ya tụnyere ngosi 60Hz.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 3 na-egosi na asọmpi egwuregwu
Kachasị mma coupon ngwa maka gam akporo
Samsung kagburu Galaxy Fold tupu ya ere ahịa na China